Orogoay: Dingana Iray Indray Ho Amin’ny Fankatoavana Ny “Marijuana” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2017 11:37 GMT
Vakio amin'ny teny Français, فارسی, Português, Italiano, Español, English
Nankatoavin'ny Antenimieran'i Orogoay ny volavolan-dalàna iray mikendry ny hanao izay haha-ara-dalàna ary hanarahana maso ny famokarana, ny fanapariahana ary ny fivarotana ny marijuana. Raha toa ankatoavin'ny Antenimieran-doholona sy soniavin'ny filoha Jose Mujica izy io, i Orogoay no mety ho firenena voalohany erantany manao ny marijuana ho ara-dalàna.
Tao anatin'ny volavolan-dalàna neken'ny antenimiera, “homena alàlana ny governemanta hivarotra marijuana,” araka izay voalazan'ny BBC News, tamin'ny 1 Aogositra 2013 lasa teo:
Ny Fanjakana no hiantoka ny “fanarahamaso sy ny fandrindràna ny fanafarana, ny fanondranana, ny toeram-pambolena, ny fambolena, ny fiotazana, ny famokarana, ny fahazoana, ny fanangonana, ny fandraharahana ara-barotra ary ny fitsinjarana ireo rongony sy ireo vokatra azo avy aminy”.
Tsy maintsy ho raiketina ao anatinà angon-drakotra iray ireo mpividy ary tsy maintsy mihoatra ny 18 taona. Afaka mividy hatramin'ny 40g isam-bolana izy ireo eny amin'ireo toeram-pivarotana fanafody nahazo alàlana manokana na hamboly hatramin'ny fototra marijuana enina any amin'izy ireo.
Saingy tsy maintsy miatrika “fanoherana masiaka” ilay volavolan-dalàna, sahala amin'izay nohazavain'ny The Economist tao anatin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe « L’Expérience »:
Tamin'ny volana lasa teo, nasehon'ny fanadihadiana iray fa ny 60%-n'ireo nohadihadiana no tsy mankasitraka, ary nohamafisin'ireo mpanohitra fa hitombo ny fanjifàna. Nefa ireo mpiandany aminy milaza fa niteraka olana betsaka ny fandraràna an'io rongony io – ny heloka bevava nomanina sy ny mety hisian'ny fanjifana an-tsokosoko – ankoatry ny maha-zava-mahadomelina azy.
Navoakan'ny The Economist ihany koa ny lahatsoratra iray manazava ilay volavolan-dalàna.
Photo shared by @CannabisMagazin on Twitter. ….. Sary nozarain'ny @CannabisMagazin teo amin'ny Twitter.
Tamin'ny taona lasa no nanomboka ny adihevitra, rehefa naboraky ny governemanta orogoaiàna ny drafitra avy aminy tsy hanasaziana ny famarotana marijuana voaara-maso.
Nithy teny anaty tambanjotra ny adihevitra, izay nandinihan'ireo olompirenena sy ireo mpandalina ao Orogoay ary ny avy any ivelany ireo vokatry ny fanaovana ny marijuana ho ara-dalàna.
Teo amin'ny Twitter, nanao fampitahana tamin'ireo fanapahankevitra vao haingana noraisin'ireo orogoaiàna mpanao lalàna i Seba Sanchez (@SebaSanchezuy), mikasika ny fanalàna zaza sy ny fanambadian'ireo mitovy fananahana:
Mampatsiahy anareo aho fa mandray anjara amina fotoana tokana ianareo. Ireo lalàna mikasika ny fanalana zaza, ny fanambadian'ireo mitovy fananahana sy ny marijuana. Mitranga eto io.
Nandritra izany fotoana izany, notsipihan’ i Alejandro Figueredo (@afigue2010) ny fanoheran'ny vahoaka ilay volavolan-dalàna
Misy zavatra tsara marihana ho an'ireo izay mandany sy mifidy ny fandrindràna ny marijuana. Manao tsinontsinona ny hevitry ny hafa izy ireo.
Nanoratra teo amin'ny blaoginy i Carlos Aloisio Razones y personas: repensando Uruguay (Ireo antony sy ny vahoaka: hiverenantsika sainina indray i Orogoay) fa ny fandrindràna ny marijuana dia “vahaolana iray, fa tsy fanafody faobe.” Nandinika ny adihevitra nasionaly mikasika ilay volavolan-dalàna i Carlos ka manamafy fa maro ireo vahoaka ao Orogoay no tsy mankatò ilay volavolan-dalàna satria “mametraka antsika ho anaty toe-javatra tsy mampahazo aina sy tsy maintsy hisafidianana ny iray amin-javatra roa ratsy io volavolan-dalàna io”:
Etsy andanin'izany, midika izay fa manaiky izahay fa manana olana, ary tafiditra anaty toe-javatra ratsy indrindra. Etsy ankilany, midika koa fa vahaolana ny fanekena ilay fandrindràna, nefa lavitry ny ho fanafody faobe io. Ireo fanadihadiana iraisam-pirenena mikasika io olana io dia manaiky ny tsy fisian'ireo vahaolana na ireo sosokevitra manerantany, ary miaiky fa raha ny marina tsy misy mihitsy tetikasa tsara indrindra. Ny vahaolana ho an'i Orogoay dia mikatsaka, miaraka, zavatra izay hahafahantsika hahazo ireo fahalalana sy traikefa mikasika ilay olana. Saingy mba hahatontosa io fikarohana io, ny zavatra atao voalohany indrindra dia ny fandrindràna.
Teo amin'ny Asuntos del Sur, nohazavain'ilay Shiliana mpikaroka, Eduardo Vargas, izay ho vokatry ny fankatoavana ny rongony ao Amerika Latina/
Goavana ny fanamby ho an'i Orogoay. Tsy mora ny ho mpisava lalana. Na izany aza, ny fahombiazan'io politika io dia miankina koa amin'ireo sisa tavela ao Amerika Latina. Mila misantatra ireo fanovàna goavana momba ireo lalàna mifehy ny zava-mahadomelina ireo firenena hafa. Raha jerena amin'ny traikefan'i Orogoay, ary ireo tao Etazonia, Colorado sy Washington, hieritreritra ihany izy ireo amin'ny farany, hamolavola sy hametraka ireo politika mijery ny maha-olombelona kokoa, matotra ary tomponandraikitra. Fotoana izao ho an'ny faritra misy antsika mba hampandraisana ny fijery sy ny pragmatisma hitondra ny firenen'i Pepe Mujica mba hitondra amin'ny maha-tomponandraikitra, miaraka amina fandrindràna voahevitra tsara.